Uphengululo lweSniper Elite V2 | Iindaba zeGajethi
Uvavanyo lweSniper Elite V2
Engaqhelekanga Ukuvukela, Emva kokuphoxeka kwakhe Ungaze ufe, ubuyela kwilizwe langoku lokududuza ngokuqhubeka kwesinye sezihloko zalo ezithile kwisizukulwana sangaphambili seekhonsoli: I-Sniper Elite, Uhlobo oluthile lwe-simulator esetyenziswe kwifayile ye- IMfazwe Yehlabathi yesiBini for PlayStation 2, Xbox y PC oko kwenzekile ngaphandle kwentlungu okanye uzuko phakathi kwabagxeki kodwa abanye abadlali baphawulwa ngendlela elungileyo.
Phakathi kwendawo yolwandle kunye nomlobi wemfazwe ngokusekelwe kwiingxabano zangoku, Sniper Elite V2 for PlayStation 3, Xbox 360 y pc, ukubheja ekubuyeni emfazweni kunye nokuyixhasa ngokubona umpu. Ngaba sijongene nomnye umonakalo we Ukuvukela Okanye baya kulibetha eli xesha, i-pun eyenzelweyo?
Inkqubo isibeka ezicathulweni ze-American sniper UKarl Fairburne, ekufuneka bangene kwiintsuku zokugqibela zika EBerlin del Ulawulo lwesithathu kwaye ufumane ezinye izazinzulu zamaNazi zisebenza kwinkqubo yerokethi V2, ngelixa sigqibezela imikhosi yaseJamani neyamaKomanisi, abalandela ikomkhulu laseJamani. Isakhiwo silula kwaye ngokuqinisekileyo asilindelanga isimanga esikhulu okanye ibali elifanele ukuphawulwa.
Imizobo yomdlalo yenye yeendawo ezibuthathaka zomdlalo. Kwelinye icala, sidibana noburhabaxa, iimpembelelo eziphelelwe lixesha, i-physics ethi ngamanye amaxesha iziphathe ngendlela engaqhelekanga ... nangona ngokwembono ngokubanzi, umdlalo uyahlawula. Nangona kunjalo, eyona nto ibalaseleyo ngale nkqubo yile ulonwabo lwe-anatomy yomntu: xa sisenza umpu ochanekileyo, sinokubona ukuba imbumbulu ephuma kumpu wethu iwonakalisa njani amathambo kunye namalungu exhoba, ngokuma okumangalisayo (ngohlobo lwesiphumo esibangelwe X-Ray Okokugqibela Mntundini Kombat, nangona kufanelekile, amathambo kunye namalungu aphuculwe ngcono kuwo Sniper Elite V2 ukuba kumdlalo we U-Ed)
Umdlalo ubizwa ngeSpanish ngenqanaba elibalaseleyo, nkqu nelalo Karl Uya kusebenza njengomlandisi phakathi komishini kunye nomsebenzi. Iingoma ziyahambelana kakhulu nokusikwa komdlalo, ziyahluka xa imeko isiba nzima, njengaxa, umzekelo, iintshaba zifumanisa indawo esikuyo. Isandi sodubulo, ngaphandle kwemipu, asinyanzeli, ngelixa kufuneka silumke xa sihamba kwaye singenzi ingxolo yokwazisa oonogada abakufutshane.
Kwinqanaba lokudlala kulapho kufuneka sibuxabise ubutyebi be- Sniper Elite V2. Kulungiselelwe abo bakonwabelayo ukuba ngabaphangi, umdlalo uya kuba nejusi kweli cala, kuba sinokukhetha ngokwahlukeneyo inqanaba lesakhono sotshaba lwe-AI kunye nohlobo lokulinganisa kwezithonga, ezinokuthi zivele kuncediso olupheleleyo okanye indlela eyiyo , apho ubunzima bembumbulu kunye nokuxabana nomoya kufuneka kugcinwe engqondweni ngalo lonke ixesha. Kuyonwabisa kakhulu ukuhamba kwinqanaba ukuze ufumane indawo efanelekileyo yokufihla okanye ufumane i-engile efanelekileyo yokuphelisa ithagethi, ukutshintsha indawo kunye nokuqhuba iintshaba.
Kodwa ayisiyiyo yonke into edweliswe kumlo Sniper Elite V2Sinokusebenzisa imipu efana nemipu engaphantsi kwemipu okanye imipu, nangona ukudlalwa kwezi zinto kunzima, ukongeza kwinto yokuba umlo we-melee omiliselwe kumdlalo ulula kakhulu. Kwelinye icala, inkqubo yokugubungela nayo inokudlala ngathi kumaxesha anzima xa ujongene nokungathobeli komlinganiswa xa usenza lo msebenzi.
Xa sigqiba imo yomkhankaso, ukuba sisafuna Sniper Elite V2, Singayikhumbula imo yebali kunye neqabane elikwi-Intanethi kwi imo yentsebenziswano. Ukongeza, kukho ezinye iindlela ezikwi-intanethi ezandisa ubomi bokudlala benkqubo: kwi ukuqhushumba Kuya kufuneka sifumane ezinye iziqwenga kwinqanaba), kukho iklasikhi imowudi yehorde kunye nemowudi isilumkiso apho omnye umdlali ephawula iithagethi kunye nomnye otsala umdlalo.
Sniper Elite V2 Ayisiyo inkqubo enokukhuphisana nomgangatho kunye neminye imidlalo emikhulu yemfazwe. Nangona kunjalo, isindululo sakhe, sabelane kuphela ngu Sniper: IGorha loMoya de Ukusebenzisana kweSixeko, yenza ukuba ibe yenye yezinikezelo ezimbalwa esivumela ukuba sibe nemfazwe ngokubona umpu wesibhamu. Ukubeka ezona zifo zothusayo ngokuzonwabisa okumangalisayo komzimba womntu sisibheno esinamandla esibonakalayo, nangona ngaphaya koku kunye nomdlalo weqonga othi, nangona ngamanye amaxesha ulinganiselwe kwaye ungalunganga, uyakwazi ukonwabisa, ungalindelanga ngaphezulu Sniper Elite V2. Ewe kunjalo, zama ukuyenza ngexabiso eliphantsi.
AMANQAKU OKUGQIBELA MUNDI VJ: 5.9
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Uvavanyo lweSniper Elite V2
IE Tab, xelisa i-Intanethi Explorer kwiGoogle Chrome
Ezona ndlela zokuthumela iifayile zetekisi kunye nokwabelana kwi-Mac yakho kwezinye izixhobo